प्लाज्मा सङ्कलन अभियान Setokhari ::. News Portal
आईतबार, कात्तिक १६, २०७७ ०३:१७:०९
चितवन : क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्र भरतपुरले कोभिड–१९ सङ्क्रमित बिरामीको लागि आवश्यक पर्ने प्लाज्मा सङ्कलन अभियान शुरु गरेको छ । यहाँ बढी भएको प्लाज्मा देशैभर पठाएर सङ्क्रमित उपचार गर्न सहयोग पुगोस् भन्नका लागि अभियान शुरुआत गरिएको हो ।
केन्द्रका प्रमुख रमेशकान्त पौडेलका अनुसार हालसम्म ३८ युनिट प्लाज्मा सङ्कलन भइसकेको छ । गत सोमबार मात्र नेपाली कांग्रेसका कोभिड–१९ अनुगमन समिति कावासोतीले एकैदिन ३३ युनिट प्लाज्मा सङ्कलन गरी केन्द्र पठाएको थियो । यसअघि पाँच जनाले केन्द्रमा नै आएर प्लाज्मा दान गरेका थिए ।
चेम्बर अफ कमर्शको ७०औँ स्थापना दिवसको अवसरमा जिल्लाका तीन ठाउँमा प्लाज्मा सङ्कलन गर्दैछ । चेम्बरका अध्यक्ष दीर्घमान श्रेष्ठका अनुसार यही असोज २७ गते सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर–३ गढीमाई बाहिनी वाग्मती प्रदेश भण्डारा, असोज २८ गते रत्ननगरको स्मार्ट फुड्स प्रालि र असोज २९ गते वडा प्रहरी कार्यालय नारायणगढमा प्लाज्मा सङ्कलन गरिँदैछ । यी तीनै ठाउँमा अत्यधिक सङ्क्रमण देखिएको थियो । उनले ती तीन ठाउँबाट १०० युनिटभन्दा वढी प्लाज्मा सङ्कलन हुने अनुमान गरे ।
केन्द्रका प्रमुख पौडेलका अनुसार काठमाडौं, बुटवल, भक्तपुरलगायतका ठाउँबाट प्लाज्मा माग भइरहेको छ । उनले भने,‘प्लाज्मा सङ्कलन अभियानका लागि सबै इच्छुक भएका छन् । यसले धेरैको ज्यान बचाउने छ ।’ प्लाज्मा चाहिए चितवन जाऊ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्न सक्ने गरी केन्द्रले काम गरीरहेको उनको भनाइ छ । हालसम्म सङ्कलन भएका प्लाज्मामध्ये चारवटा प्रयोगमा आइसकेका छन् । प्लाज्मा छ महिनासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
उनले रक्तसञ्चार केन्द्रमा प्लाज्मा जगेडा हुने गरी बैंकको विकास गर्न लागिएको जानकारी दिए । अध्यक्ष डा. अधिकारीका अनुसार जुन अस्पतालका सङ्क्रमितलाई प्लाज्मा दिनुपर्छ त्यतिबेला दिन सहज हुनेगरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । केन्द्रलाई प्लाज्मा सङ्कलनका लागि भरतपुर अस्पतालले सहयोग गर्दै आएको छ । -रासस